Laba Gelin – Kaasho Maanka
Ilaa saaka markii uu toosay dhiig baa afka uga dhadhamayey.
Markii hore wuxuu mooday in uu afka ka dhiigayo dhawr jeer ayuuna candhuuf iska soo muudiyey oo eegay dhiigse kuma uu arag, haddana waxaad mooddaa in uu xinjiro afka ku sito. Wuxuu ka fekeray goorta iyo waxa uu dareenkaasi ka soo raacay, wuuse xasuusan kari waayey. Wuxuu isku dayey in uu is illawsiiyo laakiin ma ahayn wax uu is illawsiin karo.
QORMO LA XIRIIRTA: Caashaqii labo kacleeyey (Sheeko Faneed)
QORMO LA XIRIIRTA: Sideen ku gaaloobay?
Casardheere ayuu tuuladii soo galay. Weli wuu faraxsan yahay, welise afka dhiig baa uga dhadhamaya. Maqaaxidii uu fadhiistay waxaa lala soo gaadhay bakeeri shaah ah oo rasiin ah oo kulul oo ay sonkorta iyo caddaysku ku badan yihiin. Bakeerigii oo faaruq ah haddana weli kulayl la qiiqaya ayuu hortiisa dhigay dabadeed dhidid badan oo ka soo qubtay iska masaxay. Ilaa markii uu hilibka ugaadha cunay aad buu u xaraaradaysnaa. Bakeeri kii hore la mid ah ayuu liqay dabadeed harraad ay biyuhu ka bi’in waayeen ayaa ka ba’ay, daalkiina wuu ka duulay. Inta uu shaaha cabbayo mooyee waqtiga kale oo dhan afkiisa dhiig baa ka dhadhamaya. Waar illayn balaayo!
W/Q: Ibraahim-Hawd Yuusuf 4th August 2020